Ọkara Ndị na-emepụta ihe dị ọkara - China Ọkara Ndị Na-enye Ndị Ọrụ & China
Waiter Chef Apron Canvas ọkara Apron U3061D037049U
Brand CHECKEDOUT Ihe Koodu U3061D037049U Size ONE SIZE Key word chef half apron, canvas waiter apron, canvas apron Fabric 85/15 poly / cotton Sewing string Polyester thread ka ana akpokwa ya elu ike. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, ezigbo ihe mgbochi abrasion, ihe dị ala, ezigbo hygroscopicity na mgbochi ọkụ, polyester yarn bụ corrosion na-eguzogide ọgwụ mildew, ihe ...
Brand CHECKEDOUT Item Koodu U316S0200A Size ONE SIZE Key word half pron, black half the bed apron, waron, chef apron, apiner onye na-eche nche, kichin kichin 65/35 poly / cotton GSM.235g Xinjiang Aksu owu ogologo, akwa na-enweghi ego, enweghị nkụdaji, enweghị carcinogens, ndụ ọrụ bụ oge 2 dị ka uwe isi nri oge niile. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi m ...
Brand CHECKEDOUT Ihe Koodu U316S0100A Size ONE SIZE Key word half pron, black half the bed apron, waron, chef apron, apiner onye na-eche nche, kichin kichin 65/35 poly / owu GSM.235g Xinjiang Aksu owu toro ogologo, na-enweghi ego, enweghị nkụdaji, enweghị carcinogens, ndụ ọrụ bụ oge 2 dị ka uwe isi nri oge niile. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi m ...
White Poly Cotton Chef Long Waist Apron with Pocket U311S0200A
Brand CHECKEDOUT Item Koodu U311S0200A Size ONE SIZE Key word half pron, black half the bed apron, waron, chef apron, apiner onye na-eche nche, kichin kichin 65/35 poly / cotton GSM.235g Xinjiang Aksu owu toro ogologo, enweghị ego, enweghị nkụdaji, enweghị carcinogens, ndụ ọrụ bụ oge 2 dị ka uwe isi nri oge niile. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi m ...
Black Poly Cotton Chef Long Waist Apron with Pocket U311S0100A
Brand CHECKEDOUT Item Koodu U311S0100A Size ONE SIZE Key word half pron, black half the bed apron, waron, chef apron, apiner onye na-eche nche, kichin kichin 65/35 poly / cotton GSM.235g Xinjiang Aksu owu toro ogologo, na-enweghi ego, enweghị nkụdaji, enweghị carcinogens, ndụ ọrụ bụ oge 2 dị ka uwe isi nri oge niile. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi m ...
Poly Grey Poly Cotton Waiter Long Waist Apron na Otu akpa U306S0500A
Brand CHECKEDOUT Item Code U306S0500A Size ONE SIZE Key word apron with bag, apata, oji, obere onu ogugu, chef apron Fabric 65/35 poly / cotton GSM.235g Xinjiang Aksu owu toro ogologo enweghị carcinogens, ndụ ọrụ bụ oge 2 dị ka uwe isi nri oge niile. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, ...
Wine Red Poly Cotton Waiter Long Waist Apron na Otu akpa U306S0400A
Brand CHECKEDOUT Ihe Koodu U306S0400A Size ONE SIZE Key word apron with bag, apata, oji oji oji ihe mkpuchi 65/35 poly / owu GSM.235g Xinjiang Aksu owu toro ogologo, ogha adighi, paipu, onweghi carcinogens, ndu ozi bụ oge 2 dị ka uwe isi nri oge niile. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, ezigbo abrasion re ...
White Poly Cotton Waiter Long Waist Apron na Otu akpa U306S0200A
Brand CHECKEDOUT Item Code U306S0200A Size ONE SIZE Key word apron with bag, apata, oji oji, ogho oji 65/35 poly / owu GSM.235g Xinjiang Aksu owu toro ogologo, ogha adighi, nkwụghachi, enweghi carcinogens , ndụ ọrụ bụ oge 2 dị ka uwe isi nri. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, ọ dị mma…
Black Poly Cotton Waiter Long Waist Apron na Otu akpa U306S0100A
Brand CHECKEDOUT Ihe Koodu U306S0100A Size ONE SIZE Key word apron with bag, apata, oji oji oji ihe mkpuchi 65/35 poly / owu GSM.235g Xinjiang Aksu owu toro ogologo, ogha adighi, paipu, onweghi carcinogens, ndu ozi bụ oge 2 dị ka uwe isi nri oge niile. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, ezigbo abrasion re ...
White Poly Cotton Waiter Long Waist Apron na Otu akpa na akwa akwa U302S0100A-1
Brand CHECKEDOUT Item Code U302S0100A-1 Size ONE SIZE Key word apron, apinara onye na-ele anya, akwa aka, ọkara nke ihe eji eme 65/35 poly / owu GSM.235g Xinjiang Aksu owu toro ogologo, ogha adighi, paipu, enweghi carcinogens, Ndụ ọrụ oge 2 dị ka uwe isi nri oge niile. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, ezigbo abrasion resista…
Black Poly Cotton Waiter Long Waist Apron na Otu akpa na akwa akwa U302S0100A-1
Brand CHECKEDOUT Item Code U302S0100A-1 Size ONE SIZE Key word apron, apata, oji oji oji ihe mkpuchi 65/35 poly / owu GSM.235g Xinjiang Aksu owu toro ogologo, ogha adighi, paipu, onweghi carcinogens, ndu ije ozi bụ oge 2 dị ka uwe isi nri oge niile. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, nguzogide nke abrasion dị mma, ...
Poly Cotton Waiter Long Waist Apron U302S0500A
Brand CHECKEDOUT Ihe Koodu U302S0500A Size ONE SIZE Key word apron, apata, oji oji ihe eji akwa 65/35 poly / owu GSM.235g Xinjiang Aksu owu toro ogologo, ogha adighi, paipu, onweghi ihe, ndu adighi oge dị ka uwe onye isi nri. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, nguzogide nke ọma abrasion, lo ...